Kursiga dhuumaha ee Christophe Machet, tusaale casri ah oo dib-u-warshadaynta | Abuurista khadka tooska ah
Melisa Perrotta | | Fanaaniin, General, Dhiirrigelinta
Christophe machet, naqshadeeye iyo injineer waxay ku guuleysteen inay soo saaraan ururro aad u caan ah oo wax ku ool ah oo dib loo rogay kuraasta casriga ah.
Naqshadeeyaha fadhigiisu yahay Paris, soo bandhigay aruurinta loo yaqaan 'Pipeline inta lagu gudajiray Toddobaadkii Naqshadeynta Milan. Waxaa lagu soo bandhigay carwada 'Alcova gallery', waxaa lagu arkay hareeraha bilicsanaanta warshadaha, darbiyada aan rinjiga lahayn iyo dabaqyada qoyan.
Ujeeddada mashruucu waxay ahayd in la muujiyo sida loo hubo waxyaabaha la tuuray dib ayaa loo isticmaali karaa si loo horumariyo fikradaha kala duwan ee warshadaha.
Dareenkan, Naqshadeynta Machet waxaa loo kala goyn karaa hal xabbo oo laga soo qaado a beebka cabbirka cabbirka cabbirka caadiga ah. Shaygan dib loo cusboonaysiin karo wuxuu si aad ah ugu shaqeeyaa nashqadeynta kursiga iyadoo ay ugu wacan tahay awooda PVC.
Ahaanshaha a qiimo jaban, qalab muddo dheer soconaya oo leh curvature dabiici ah caqli ahaan waxaad ka heli kartaa kursi aad u jaban oo soo jiidasho leh oo gadaal gadaal ah. Sababtaas awgeed waa kuwo aad u jaban waxayna jiri karaan tobannaan sano.
Si loo rumeeyo mashruucaaga, Machet waxay ahayd inuu naqshadeeyo mashiinkiisa wax goynta. Si tan loo sameeyo, wuxuu abuuray mashiin caado ah oo ka kooban saddexda mitir ee dhuumaha dheer, kaas oo isna u lahaa inuu meerto u oggolaado gooynta Soo saarida mashiinkan cusub ayaa suuragal ka dhigaya in la dhiso kuraasta si loo dalbado. Sidan oo kale, marka kuraasta la jaro, ayaa lagu rinjiyeeyay buufin midabhurdi, casaan ama cadaan. Ugu dambeyntiina, lugaha laga sameeyay plywood dabiici ahaan.
Si ka duwan alaabada kale ee balaastigga ah, waxa ugu weyn ee ku saabsan kursiga dhuumaha waa in aan la qaabeyn; halkii, waa laga gooyaa walxo horay loo sameeyay. Astaantani waxay u oggolaaneysaa wax soo saarkaaga inuu qabsado ugu yaraan shaqo isla markaana uu yareeyo qiimaha wax soo saarka.
Si kastaba ha noqotee, waxa ka soocaya wax soo saar kasta oo kale waa iyada habka wax soo saarka miyir-beelka.
Christophe Machet ayaa ka qalin jabiyay "Kuliyadda Fanka ee London" 2012, isagoo horey wax uga bartay ECAL, sidaa darteed, shaqadiisu waxay caadi ahaan muujineysaa xiriirka injineernimada iyo fikradaha naqshadeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Dib-u-warshadaynta iyo kursiga dhuunta ee Christophe Machet
10 Casharro Wordpress oo bilaash ah oo ku habboon bilowga